Archive du 20190208
Fanjakana Rajoelina Mipoerapoera amin’ny asa vitan’ny hafa
Tapa-bolana mahery izay no nitantanan’ny fanjakana Rajoelina ny firenena, ary tsy mbola ampy hitsarana azy izany.
Randrianasolo Jean Nicolas Hanohana an-dRajaonarimampiana hatrany
Anisan’ireo tapa-kevitra ny hanova tanteraka ny tontolo politika misy eto amintsika manomboka izao ny tenako, hoy ny solombavambahoaka teo aloha voafidy tany Betroka,
Fanjakana Rajoelina Tena kinga amin’ny fakana fananan’olona ?
Manomboka mihetraketraka ny fanjakana Rajoelina. Raha ny fampitam-baovao avy any Antsiranana dia raikitra ny fandrefirefesana ny tanin’ny orinasa Tiko any Arasara any Antsiranana any.
Depiote hiatrika fifidianana “Miainkina amin`ny fanjakana ny isany”, hoy ny CENI
· Namoaka ny didim-panjakana miantso ny mpifidy handatsa-bato amin’ny fifidianana solombavambahoaka ny 27 mey ho avy izao ny governemanta. Roso amin`ny dingana samihafa amin`ny fanatanterahana izany isika, hoy ny teo anivon`ny CENI.
Tranon`ireo depiote ao Tsimbazaza Misy zavatra tsy milamina
Tapitra ny 5 febroary misasakalina teo ny fe-potoana niasan`ireo solombavambahoaka.
Rafaramandimby Bona Jean Pierre Tsy nahazo nanatrika ny hetsiky ny 7 febroary
Tsy mahazo manatrika hetsika na lanonana intsony Rafaramandimby Bona Pierre, filohan’ny fikambanana niaram-boina tamin’ny 07 febroary taona 2009 na AV7, mpiara-dia tamin’ny antoko HVM teo aloha.
Moramora ihany ee !
Miarahaba anao aho ry Jean ! Tena arahabaina ianao satria mbola velon’aina. Raha ny vitanao hatreto mantsy dia tokony tsy ho tratry ny famindram-po tahaka izao
Mpamotika fa tsy mpanangana !
Efa ny fanjakana mpamotika ny firenena tany amin’ny folo taona lasa no mitondra ny firenena amin’izao fotoana izao.
Fiainam-piarahamonina Ny Malagasy mihitsy ve no tsy te handroso ?
Firenena sahirana isika ary mbola “miady amin`ny kapoaka”. Raha ny fiainan`ny ankamaroan`ny Malagasy no jerena akaiky dia feno fanaratsiana, fihatsarambelatsihy, kolikoly, fitiavan-tena…
Traboinan’Ampamarinana Nafindra etsy amin’ny INFP sy kianja mitafon’i Mahamasina
Omaly alakamisy 07 febroary no fe-potoana farany nomena ireo olona monina eny amin’ny Fokontany Ampamarinana sy ny manodidina tafiditra ao anatin’ny faritra mena, ahiana hisy fihotsahan’ny tany sy fianjeran’ny vato.
EPP Andraharo Tsy misy “cantine scolaire” intsony, sahirana ireo mpianatra
Tsy manana “cantine scolaire” intsony ny eo anivon’ny EPP Andraharo, sekolim-panjakana iray mandray ireo zanaky ny sahirana eny an-toerana.